Aza avela ho tany lavitra andriana ny Kaominina Ambanivohitr’i Solila il y a 10 heures
Faha 150 taona nidiran’ny finoana katolika tao Fianarantsoa il y a 10 heures
Les Sakalava et Antandroy au bord d’un rude conflit communautaire à Tsaramandroso il y a 10 heures
" Mpitarika amin’ny fotoanan’ny krizy ary mpamolavola ny hoavy"
Rwat il y a 3 mois
Ny UNESCO no nametraka ny 5 oktobra ho andro natokana ho an’ny mpampianatra maneran-tany. Ka misy lohateny hatrany hanamarihana izany andro izany. Inonano lohahevitra ho an'ity taona 2020 ity? Inona no ataon'ny Conamept?
Fanomanana taom-pianarana 2020-2021
Nanome tantsoroka ho an’ny ZAP Alasora ny Conamept
Rabodoson Voahangy il y a 4 mois
Manambatra fikambanana sy fivondronana ary sendika maherin’ny 20 ny Conampet, ny Coalition Nationale Malagasy pour l’éducation pour Tous. Misehatra hanomezana ny fanabeazana lafatra ho an’ny daholobe no isan’ny tanjona kendreny nanomboka ny taona 2012
Elie a perdu l’ouïe mais il a réussi ses études avec un DEA
Le présent portrait est dédié à toutes les personnes sourdes de Madagascar, en cette semaine internationale des personnes sourdes.
Menabe dotée d'une nouvelle école
Recueilli par RV il y a 4 mois
La 78ème école du programme SEKOLY TELMA a inauguré par la Fondation Axian le 17 septembre 2020 dans la région Menabe à Morondava, dans le village de Mokotra plus précisément.
Nampiofana tany Ankadinandriana ny Conamept
Mandray anjara mavitrika amin’ny fanomanana ny fidiran’ny mpianatra ny Conamept. Mampiofana ireo mpanabe, manentana amin’ny fiadivana amin’ny valanaretina covid-19. Ny ZAP Ankadinandriana no nisantaran’ny Conamept ny asany taorian’ny fihibohana tamin’ny fanomanana ara-tsaina sy ara-batana no natao.
Fampianarana sy fanabeazana hitondra fivoarana tokoa ve ?
Rahary il y a 4 mois
Satria manano-sarotra ny fanapariahana ny gazety Lakroa (Lakroan’i Madagasikara) sy famarotana azy (any amin'ny paroasy no maro amintsika mpamaky Lakroa) dia eto amin’ny tranonkala no hamoahana ireo lahatsoratra tokony ho novakianao tao amin’ny laharana mivoaka ny alahady 6 septambra izao, laharana 4197.